बिना थापाको दुर्घटना मा मृत्यु ! अन्तिम फिल्म पिजडा ब्याक अगेन - Bulbule Khabar
बिना थापाको दुर्घटना मा मृत्यु ! अन्तिम फिल्म पिजडा ब्याक अगेन
काठमाडौ । दुर्घटनामा परी कलाकार विना थापाको निधन भएको छ । बुधबार बत्तीसपुतलीमा भएको दुर्घटनामा कलाकार विना थापाको मृत्यु भएको हो । बा.२ ख ८९४ नम्बरको पानी ट्याङकरले बा.५५ प १३८७ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा २७ बर्षीया विनाकुमारी थापाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस १२, २०७४ 10:26:49 PM
Prevके हामी रेड लाईट क्षेत्रमा काम गर्ने बर्ग हौ ? कलाकार संघलार्इ निर्मल शर्माको प्रश्न
Nextअध्यादेश आउँदैः यसकारण पछि हट्दै छ एमाले